We Fight We Win. -- " More than Media ": ဦးပိုင်နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေး ကော်ပိုရေးရှင်းတို့၏ မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးအပေါ် ချုပ်ကိုင်ထားမှု
ဦးပိုင်နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေး ကော်ပိုရေးရှင်းတို့၏ မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးအပေါ် ချုပ်ကိုင်ထားမှု
နေ့သစ် မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
၁။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ထိုအချိန်က န၀တ (နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအ ဖွဲ့) အစိုးရ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဦးပိုင်လီမီတက် (The Union of Myanmar Economic Holdings Limited) ကို ၁၉၅၀ ခုနှစ် အထူးကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းကြောင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၇/၉၀ ဖြင့် ကြေညာခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့၊ အာဏာသိမ်းပြီး နောက်ပိုင်း တပ်မ တော်က တည်ထောင်ခဲ့သည့် ပထမဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။
၂။ “ဦးပိုင်” စနစ်ဆိုသည်မှာ မိမိအရင်းထက် အဆပေါင်းများစွာပိုသော လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းများကို ဖြန့်ခွဲချုပ်ကိုင်သည့် လက်ဝါးကြီးအုပ်စနစ်ဖြစ်သည်။ စစ်တပ်ဦးပိုင်လီမိတက်သည် အထူးကုမ္ပဏီတခုအနေဖြင့် ၎င်းမှ အပြည့်အ၀ပိုင်ဆိုင် သော ကုမ္ပဏီများနှင့်ကုမ္ပဏီခွဲများသည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် အထူးအခွင့်အရေးကို ရရှိခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သောကုမ္ပဏီများမှာမူ ဤအခွင့်ထူးကို မခံစားရချေ။
ဦးပိုင်လီမ်ိတက်သည် သေးသေးမွှားမွှားလုပ်ငန်းနှင့် အရှုံးအမြတ်မသေချာသော လုပ်ငန်းမျိုးတွင် မပါဝင်ကြချေ။ ဦးပိုင် သည် ဖရစ်ဝါနာ၊ ဒေ၀ူးတို့နှင့် ဖက်စပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ပွဲဦးထွက်ခဲ့သည်။ ယခု စစ်တပ်ဦးပိုင်လီမိတက်တွင် အစုရှယ်ယာဝင် များက ဒါရိုက်တာရွေးချယ်ခွင့်မည်သို့ရှိကြောင်း ရှင်းအောင် မကြေညာခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
၃။ တရားဝင်ဖော်ပြထားသော ရည်ရွယ်ချက် (၄) ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်
အမှန်တွင်မူ ဦးပိုင်လီမိတက်ကို န၀တ/နအဖ စစ်အုပ်စုက တည်ထောင်လိုက်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ထဲတွင် စစ်တပ်အရာ ရှိကြီးများကသာ ထိပ်ပိုင်းမှ ချယ်လှယ်အကျိုးခံစားရရေး၊ တပ်သားများ၏လခကိုဖြတ်ပြီး အရင်းပြုကာ သွေးစုတ်ရေး စသည်တို့ အလိုလိုပါဝင်ပြီးဖြစ်နေသည်။ အောက်ခြေတပ်မှူးတပ်သားများ၏ဘ၀ကို အသေခံပဲစားဘ၀မှ မြှင့်တင် မည့်ရည်ရွယ်ချက် လုံးဝမပါဝင်ချေ။
ချုပ်ပြောရလျှင် စစ်အာဏာရှင်သက်ဆိုးရှည်ရေးနှင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ် မိသားစုများ၏ ရာသက်ပန်အကျိုးစီးပွားအတွက် တိုင်း ပြည်၏စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောတခုလုံးအား အာဏာဖြင့် လက်ဝါးကြီးအုပ်ရန် ပြင်ဆင်လုပ်ကိုင်ခြင်းပင် ဖြစ် သည်။
၄။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဦးပိုင်လိမိတက်တွင် ဥေဿျှာင်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဥက္ကဋ္ဌရုံး (ဒါရိုက်တာအဖွဲ့) ဖွဲ့စည်း ပုံဟူ၍ ဖွဲ့စည်းပုံနှစ်ခုရှိသည်။ ဥေဿျှာင်အဖွဲ့တွင်
- ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ (တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်)၊
- ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေး (ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်)၊
- ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်း အောင်လှိုင် (ကြည်း/ ရေ/လေ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး)၊
- ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဉာဏ်ထွန်း (ဦးစီးချုပ်-ရေ)၊
- ဒုတိယဗိုလ် ချုပ်ကြီးမြတ်ဟိန်း (ဦးစီး ချုပ်-လေ)၊
- ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းထိုက် (တပ်မတော်စစ်ဆေးရေးအရာရှိချုပ်)၊
- ဗိုလ်ချုပ်လှရွှေ (တွဲဖက်စစ်ရေးချုပ်) တို့ ပါဝင်သည်။
ဥက္ကဋ္ဌရုံး ဒါရိုက်တာအဖွဲ့တွင် ယခင်က ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အေး (ကက ထုတ်) ဖြစ်ပြီး ယခု ဗိုလ်ချုပ်ခင်ဇော်ဦး (စစ် ရေးချုပ်)၊ ဗိုလ်ချုပ်ဝင်းသန်း (ကက၀ယ်)၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ညွှန် ကြားရေးမှူးရုံးများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ အ ရာရှိချုပ်များ၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့် ဗိုလ်မှူးကြီးများ ပါဝင်သည်။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဦးပိုင်လိမိတက် လက်အောက်ရှိ လုပ်ငန်းများအား ဥက္ကဋ္ဌရုံး (ဒါရိုက်တာ)အဖွဲ့ဝင် ပါ ၀င်သော ဗိုလ်မှူးကြီးများ၊ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးများမှ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာများ၊ ဒါရိုက်တာများအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင် ရွက်သည်။
အငယ်တန်းစာရေးမှ ရုံးအုပ်အထိ ရာထူးများသည် အမှုထမ်းများဖြစ်ပြီး လက်ထောက်မန်နေဂျာနှင့်အထက် ရာထူးများ သည် အရာထမ်းများဖြစ်သည်။ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လိမိတက် လက်အောက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သော အငယ် တန်းစာရေး၏ လစာမှာ (၄၇၀၀၀) ကျပ်နှင့် တလစားစရိတ်ငွေမှာ (၃၆၀၀၀) ကျပ် (ရုံးပိတ်ရက် ၈ ရက်မပါ) စုစုပေါင်း ၈၃၀၀၀ ကျပ်ရရှိသဖြင့် တပ်မတော်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော တပ်ကြပ်ကြီးများထက်ပင် လစာပိုများနေပါ သည်။
မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဦးပိုင်လိမိတက်၏ ဥက္ကဋ္ဌမှာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ဇော်ဦး၊ စီးပွားရေးဦးပိုင်လိမိတက်၏ မန်နေဂျင်းဒါရိုက် တာမှာ ဗိုလ်ချုပ်ဝင်းသန်းဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးဦးပိုင်လိမိတက်၏ ဥက္ကဋ္ဌရာထူးအား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေးတို့၏ စိတ်ချရသောလူယုံများကိုသာ ထားလေ့ရှိသည်။ ဗိုလ်ချုပ်ဝင်းသန်းမှာလည်း ကက ၀ယ်မှဖြစ်သောကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ မီးဖိုချောင်ကို ဖြည့်တင်းပေးနေရသော စပါးကျီနှင့် စတိုးဆိုင်ကြီး၏ မန်နေဂျာသဖွယ် ဖြစ်ပေသည်။
ဒုတိယ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာမှာ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးသန်းထွန်း (DSA 17)၊ ယခင် ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမောင်မောင် (DSA 15) ၏ နေရာဖြစ်သည်။ ၎င်း၏နေရာသည်လည်း ၀င်ငွေအလွန်ကောင်း၏။ ပစ္စည်းလျှောက်လွှာများအား ၎င်းမှ တဆင့် စီးပွားရေးဦးပိုင်ဥက္ကဋ္ဌသို့ တင်ပြရသည်။ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးသန်းထွန်းသည် စီးပွားရေးဦးပိုင်၏ အုပ်ချုပ်ရေးဌာန အကြီး အကဲလည်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီမံရေး၊ ၀န်ထမ်းခန့်ထားရေးနှင့် ပစ္စည်းလျှောက်လွှာများအား ကိုင်တွယ် ထားသည်။
၅။ အစကနဦး အရင်းအနှီးပမဏမှာ ၁၉၉၀ ခုနှစ်ခန့်က ကျပ်ကုဋေတထောင် (သန်း ၁၀၀၀၀) ရှိသည်။ ဗမာပြည်သမိုင်း တွင် စတင်တည်ထောင်စလုပ်ငန်းတခုအဖို့ အကြီးမားဆုံးအရင်းအနှီးအဖြစ် စံချိန်သစ်တင်လိုက်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၇/၉၀၊ အပိုဒ် ၄၊၅၊၆ အရ အရင်းအနှီး၏ ၄၀% ကို ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးက ထည့်ဝင်ပြီး ကျန် ၆၀% ကို စစ်တပ်အသိုင်းအ၀ိုင်းများက ထည့်ဝင် သည်။
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး (ကကဝယ်) က ထည့်ဝင်သည့် ၄၀%၊ တနည်း ကျပ် ကုဋေ ၄၀၀ မှာ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာများ ဖြစ်သည်။ အချုပ်ဆိုရသော် စစ်တပ်အ၀န်းအ၀ိုင်းက (တကယ်စင်စစ်အားဖြင့် စစ် တပ်ထိပ်သီးများက) ပိုင်ဆိုင်ခံစားကြမည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးအတွက် ပြည်သူလူထု၏ငွေ ကျပ်ကုဋေ ၄၀၀ ကို အတိုးမရှိ ဆွဲသုံးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျန် ၆၀% ကို စစ်မှုထမ်းဆဲနှင့် အငြိမ်းစားတပ်မတော်အရာရှိများ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းအုပ်စုများ အပါအ၀င် တပ်မတော် ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် မိတ်ဆွေအဖွဲ့များက ပိုင်ဆိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဦးပိုင်သို့ထည့်ဝင်ရမည့် ငွေကြေးအချိုးအစားအရ တပ်ကြီးဆိုရင် သိန်း (၁၀၀၀)၊ တပ်ရင်း/ တပ်ဖွဲ့အဆင့် တပ်လတ် ဆိုရင် သိန်း (၃၀၀) မှ (၅၀၀)၊ တပ်ငယ်ဆိုရင် သိန်း (၂၀၀) မဖြစ်မနေ ရည်မှန်းချက်ထား၍ သတ်မှတ်ကာလတခု အ တွင်း စုဆောင်းထည့်ဝင်ရမည်ဟု ညွှန်ကြားချက်ရှိခဲ့သည်။ ဤငွေများကို တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များက ကိုယ့်အစီအစဉ်နှင့် ကိုယ့် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရှာကြရသည်။
၇။ ၂၀၀၆-၀၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တနှစ်အတွင်း ဦးပိုင်လီမိတက်သည် အမြတ်ငွေ ကျပ်သန်းပေါင်း ၅ သောင်းခန့် ရှာဖွေနိုင် ခဲ့သည်။ ဦးပိုင်လီမိတက် ကုမ္ပဏီအားလုံးပေါင်းလိုက်လျှင် ဒီ့ထက်များသည်။ ၁၉၉၅-၉၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကမူ ၃၀% အ မြတ်ငွေပြန်ရခဲ့သည်။
သို့သော် သိန်း ၁၀၀၀ အောက်ရှယ်ယာဝင်ထားသည့် တပ်ဖွဲ့များအတွက် တနှစ်လျှင် (၁၂%) အမြတ်ငွေခွဲပေးသည်။ သိန်း ၁၀၀၀ နှင့်အထက် ရှယ်ယာဝင်ထားလျှင်မူ ၂.၅% သာ အမြတ်ခွဲပေးသည်။ ဤအမြတ်ငွေကို သက်ဆိုင်ရာ တပ်မှူးက မိမိ၏တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့အတွက် လိုအပ်သလိုသုံးစွဲနိုင်သည်။ ဥပမာ ယူနီဖောင်း၊ မူကြိုကျောင်း၊ စစ်ဖိနပ် စသဖြင့်။ သို့သော် လွန်ခဲ့သည့် ၅ နှစ်ကတည်းက တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များသို့ ပေးရမည့်အမြတ်ငွေများအား မပေးတော့ဘဲ ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက် ထားရှိကြောင်း သိရသည်။
လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများမှာ ကျောက်မျက်ရတနာတူးဖော်ရေး၊ရွှေသတ္ထုတူးဖော်ရေး၊ ခဲသတ္တုတူးဖော်ရေး၊ အထည်ချုပ် စက်ရုံ၊ သစ်နှင့်သစ်အခြေပြုလုပ်ငန်း၊ စားသောက်ကုန်နှင့်အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်း၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ကုန်တိုက်ကြီး များ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ ကွန်ပျူ တာ၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ခြံမြေအရောင်းအ၀ယ်၊ သံမဏိစက်ရုံ၊ ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်ရေး၊ ဆီအုန်း စိုက်ပျိုးရေး၊ သကြား စက်၊ ရေထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း၊ မော်တော်ကားစက်ရုံ၊ အလှကုန်နှင့် စာရေးကိရိယာဆိုင်များ စသည်တို့ ပါဝင်သည်။
ကုမ္ပဏီအမည် ထပ်ဆင့်ကန်ထရိုက်/တွဲဖက် လုပ်ငန်းအမျိုးအစား
မြန်မာ့ပတ္တမြားလုပ်ငန်း World Precious Gem Co. Ltd.၊ နီလာရိုးမကုမ္ပဏီ၊ အာရှအဖိုးတန်ကျောက်မျက် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ မြန်မာစည်သူရတနာကုမ္ပဏီ၊ဇော်ဇော်ကုမ္ပဏီ၊ ရှမ်းရိုးမ ကုမ္ပဏီ ကျောက်မျက်ရတနာ တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်း (မိုးကုတ်- မိုင်းရှူး-နန်းယား)၊ သပိတ်ကျင်း ရွှေသတ္ထုတူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ မော်ချီး ခဲသတ္တုတူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်း။
မြန်မာ အင်ပီရီယယ်ဂျိတ် ကုမ္ပဏီ လိမိတက် ရှယ်ယာမိသားစုကုမ္ပဏီ လီမိတက်၊ Gold Gade Gems Co.၊ နီလာရိုးမ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဆားမှော်ကျောက်စိမ်းတူးလုပ်ငန်း၊ ကျောက်စိမ်း ကျောက်မျက်ရတနာ အချောထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း။
Rothmans of Pall Mall Myanmar Pte. Ltd. Red Ruby စီးကရက်စက်ရုံ၊ ဒူးယားစီးကရက်စက်ရုံ (ပခုက္ကူ)၊ စီးကရက်လုပ်ငန်း
ဗန္ဓုလသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း ပါရမီပို့ဆောင်ရေး၊ ရှမ်းမလေး၊ ရွှေမန်းသူ၊ ပုသိမ်သူ ဘတ်စ်ကားလိုင်းလုပ်ငန်း၊ အဝေးပြေးခရီးသည် လုပ်ငန်း၊ ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း
န၀ဒေးဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား လီမိတက် Central Hotel, Ngwe Saung Beach Hotel, Mogok Motel, န၀ဒေး ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား အေဂျင်စီ ဟော်တယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း
မြန်မာဘရူဝါရီလီမိတက် Singapore – Fraser & Neave ကုမ္ပဏီ ဘီယာနှင့် အရက်ချက်လုပ်ငန်း(မြန်မာဘီယာ၊ အေဘီစီစတောက်ဘီယာ၊ တိုက်ဂါးဘီယာ)
Myanmar Posco Steel Co. Ltd. တောင်ကိုရီးယား ပိုဟွန်နှင့်သံမဏိ ကုမ္ပဏီ အမိုးသွပ်ပြားနှင့် ဗြောင်သွပ်ပြား
Myanmar Cement Co. Indonesia – P.T. Semen Cibninong & P.T. Prima Comexindo ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်ရေး(ဆင်မင်းဘိလပ်မြေစက်ရုံ၊ ကျေက်ဆည်)
Myanmar Samgong Industrial Co. Ltd. South Korea – Samgong Industrial Co. ရာဘာလှေထုတ်လုပ်ရေး
Mamee Double Decker Ltd. မလေးရှား-မာမီးကုမ္ပဏီ အော်တိုခေါက်ဆွဲထုပ်လုပ်ငန်း
Berger Paints Manufacturing Ltd Singapore – Berger International အိမ်သုတ်ဆေးထုတ်လုပ်ရေး
The First Automotive Co. Ltd. Isuzu, Mitsugi မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
Myanmar Forward Support Co. စင်္ကာပူ– SKS Marketing Pte. ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ လွှဲပြောင်းရေး
တော်ဝင် ပလပ်စတစ် ရက်ထည်အိပ် စက်ရုံ၊တော်ဝင်ပလပ်စတစ် လူသုံးကုန်စက်ရုံ
ဂရင်းနိုက် ကျောက်ပြား စက်ရုံ
၉။ မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း (မစက)သည် စစ်တပ်မှ စီမံခန့်ခွဲလုပ်ကိုင်သည့် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း နောက်တခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တပ်မတော်၏အလျှို့ဝှက်ဆုံး စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ ၁၉၈၉ ခု မတ်လ တွင် န၀တ အစိုးရသည် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရာ ဤဥပဒေအရ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ၁၂ ခုကို နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်ရန် အစိုးရ၌သာ အခွင့်အရေးရှိသည်၊ သို့သော် တခြား လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် တခြားအဖွဲ့အစည်းတခုခုနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သည်ဟု ဖော်ပြပါရှိသည်။
၁၉၉၇ ခု မတ်လတွင် နိုင်ငံတော်မှ ငွေကြေးမထည့်ဝင်ဘဲ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းတခုခုက အဆိုပါလုပ်ငန်းများကို လုပ်နိုင် သည်ဟု ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပြီးနောက် မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းကို ထူထောင်ခဲ့သည်။ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ နိုင်ငံတော်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရန်အလို့ငှာ တပ်မတော်၏လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့် ကာကွယ် ရေးအသုံးစရိတ် လျှော့ချရန်၊ တပ်မတော်စစ်မှုထမ်းများ၏ သက်သာချောင်ချိရေးကို လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် တပ်မတော်အ တွက် အခြားလိုအပ်သော ကိစ္စရပ်များအကောင်အထည်ဖော်ရန် ဟူ၍ဖြစ်သည်။ (မစက) ကို စစ်ထောက် ချုပ်ဗိုလ်ချုပ် ဝေလွင် ရုံးအောက်တွင်ထားရှိသည်။ (မစက) ၏ ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ ကျပ်ငွေ (၁၀) ဘီလျံရှိသည်။
စက်ရုံများ ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများ လုပ်ငန်းအမျိုးအစား
ကုန်စည်ခန့်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်း (ရန်ကုန်) Tyazhpromexport Co., Ltd.
ဒဂုံဝင်းဝင်း၊ သံလွင်၊ မြန်မာကိုင်ဒို၊ ငွေဆင် သံမှို တံတားဘောင် သံဆူးကြိုး သံရိုင်း ထုတ်လုပ်ရေး၊ ကုန် သွယ်ရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန်ပစ္စည်းကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ အာမခံလုပ်ငန်း၊ စက်မှုထုတ် ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ သတ္တုတူးဖော်ထုတ် လုပ်ရေး၊ ဟော်တယ်လုပ်ငန်း၊ ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း၊ သွင်းကုန်-ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း၊
တပ်မတော် ချည်မျှင်စက်ရုံ (မိတ္ထီလာ)၊တပ်မတော် အထည်ချုပ်စက်ရုံ (မင်္ဂလာဒုံ)၊တပ်မတော် မိုးရေကာဖျင်စက်ရုံ (သမိုင်း)၊တပ်မတော် ရှူးဖိနပ်စက်ရုံ (သမိုင်း)၊ တပ်မတော်ချည်မျှင်စက်ရုံ (သမိုင်း)၊တပ်မတော်ဘောလုံးစက်ရုံ (မှော်ဘီ)၊ တပ်မတော်သတ္ထုပစ္စည်းစက်ရုံ(အုတ်ကျင်း)၊ တပ်မတော် သားရေစက်ရုံ (မန္တလေး)၊ တပ်မတော် ဆေးဝါးစက်ရုံ (မှော်ဘီ) ၊ တပ်မတော် လ္ဘက်စက်ရုံ (နမ့်ဆန်) (သံတောင်) (ရန်ကုန်)၊တပ်မတော်စည်သွပ်စက်ရုံ (မန္တလေး)(သံတွဲ)၊တပ်မတော် ပုဇွန်ငါးပိနှင့်ငါးချဉ်စက်ရုံ (မှော်ဘီ)၊ တပ်မတော်ဘီစကွတ်နှင့်ခေါက်ဆွဲစက်ရုံ(မှော်ဘီ)၊တပ်မတော်ရမ်စက်ရုံ (ရွှေပြည်သာ)၊ တပ်မတော်ဂျုံမှုန့်စက်ရုံ (သြဘာ)၊ပျဉ်းမပင် နို့ထွက်ပစ္စည်းစက်ရုံ၊ မြဝတီပုံနှိပ်တိုက်၊မြဝတီရုပ်သံ
၁၁။ အဆင့်အသီးသီးရှိ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဆက်လက်ပါဝင် လုပ်ကိုင်နေကြသည်သာ မက တိုးချဲ့၍ပင် လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ အောက်ခြေအဆင့်တပ်ဖွဲ့များ၌ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းနှင့် အခြား အ်ိမ်တွင်းမှု လုပ်ငန်း စသည့် သာမန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပြင်၊ အချို့တပ်ရင်းများသည် ရေခဲစက် သို့မဟုတ် ကုန်းလမ်းသယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး စသည့် အငယ်စားလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ တပ်ပိုင်အဆောက်အဦ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ် အားသာမက ကုန်တင်ကားများကိုပင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် ငှားရမ်းသည့်ကိစ္စ အများအပြားရှိသည်။
၁၂။ သို့သော် အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသည့် တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များအကြား နေရာအတော်များများ၌ ကွာဟမှုရှိပုံပေါ်သည်။ ထောက်ပံ့မှုများတွင် အဆမတန်ကွာဟမှုရှိသည်။ တချို့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များသည် လစဉ်ထောက်ပံ့ငွေ အတော်အတန် ကောင်းမွန်စွာပေးနိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသများရှိ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များမှာမူ ငွေသားထောက်ပံ့မှုမှာ အနိမ့် ဆုံးလိုအပ်ချက် ဖြည့်ဆီးနိုင်ရန်ပင်ခက်ခဲလှသည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ၁၅၀၀ ကျပ်မျှသာ ထောက်ပံ့နိုင်ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ကျပ် (၃၀၀၀) သာ ထောက်ပံ့နိုင်သည်။
ဤဖြစ်ရပ်များမှာ အဖွဲ့အစည်း စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို စတင်ခြိမ်းခြောက်နေပြီး၊ တပ်ရင်းဘားတိုက်များတွင် လိုင်စင်မဲ့ ကားများထားပေးခြင်း သို့မဟုတ် စစ်ထရပ်ကားများဖြင့် မှောင်ခိုကုန်များသယ်ယူပေးခြင်း စသည့် ဥပဒေပြင်ပစီး ပွားရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ရန် တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များကို အားပေးနေခြင်းလည်း ဖြစ်သောကြောင့်၊ တပ်မတော်ခေါင်း ဆောင်ပိုင်းများက တသီးပုဂ္ဂလစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ရပ်ပစ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
၁၃။ “၀န်ကြီးဌာနများနှင့်ဦးစီးဌာနများသည် ၀န်ထမ်းသက်သာချောင်ချိရေးအကြောင်းပြပြီး ရံပုံငွေရှာဖွေရန် အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွဲ့စည်းရတော့မည်မဟုတ်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှစ၍ ၀န်ထမ်းအားလုံးအတွက် အစိုးရက တဦးလျှင် ကျပ် ၅၀၀၀ လစဉ်အပိုဆောင်းငွေပေးထားပြီးဖြစ်သည့်အတွက် ဤနှစ်ကုန်တွင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအားလုံး ရပ်ဆိုင်းကြရန်” ဟု ၂၀၀၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၃၀)ရက်နေ့၊ ကက်ဘိနက်အစည်းအဝေး၌၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ က လမ်းညွှန်ချက်ပေးခဲ့သည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများမှလွဲ၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးနှင့် တပ်ရင်းရံပုံငွေနှင့် ဆက်စပ် သည့် တရားဝင်ပိတ်ပင်ထားသည့်လုပ်ငန်းများကို ၂၀၀၄ ခုနှစ် မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့တွင် အဆုံးသတ်ရန် ဒီဇင်ဘာလ တွင် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက တပ်မတော်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့အားလုံးသို့ ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ဤအမိန့်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချို့အား ၀န်ကြီးဌာနများ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးသို့ လွှဲပြောင်းပေးရန်နှင့် မလွှဲပြောင်း သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံး ဖျက်သိမ်းပစ်ရန် ဖြစ်သည်။
၁၄။ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အေး (နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် နှင့်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်း ထုတ်လုပ် ရေးအရာရှိချုပ်) မြန်မာ့စီပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်၏ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူပြီးနောက် ၂၀၀၂ ခုနှစ်ကစ၍ သဘာဝဓာတ် ငွေ့မှ အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေ ၅ ဘီလီယံခန့် (သန်း ၅၀၀၀) ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရထံမှ အတိုးရောအရင်းပါရရှိခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်း လည်း နှစ်စဉ်ပုံမှန်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ရရှိသောငွေများကို ထိုင်းနှင့်စင်္ကာပူရှိ မြန်မာသံရုံးများ၏ သံတမန် အခွင့်အရေးအောက် တွင် သီးခြားဘဏ်ငွေစာရင်းများဖွင့်၍ သဘာဝဓာတ်ငွေ့မှရသောငွေများကိုသွင်းရသည်။ အဆိုပါသီး သန့်ဘဏ်ငွေစာ ရင်းများကို ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်အဆင့်သတ်မှတ်ကာ မြန်မာ့စီပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အေးမှ တာဝန်ယူရသည်။
အဆိုပါဘဏ်ငွေစာရင်းများမှ စစ်တပ်နှင့်ပတ်သက်၍ လေယာဉ်များအပါဝင်အဆင့်မြင့်လက်နက်ကြီးငယ်များ၊ အနုမြူ နှင့်ဒုံးလက်နက်ကိစ္စများကို မြန်မာ့စီပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်က စစ်တပ်အတွက် ဝယ်ယူပေးရသည်။ သုံးစွဲခွင့်အမိန့် အာ ဏာကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေမှပေးကာ ချက်လက်မှတ်ကို ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အေးက ထိုးပေးရပါသည်။ ဘဏ္ဍာ ရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ အဆိုပါဘဏ်ငွေစာရင်းများမှ လွှဲပြောင်းပေးသည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာကို မြန်မာ့ စီးပွား ရေးဦးပိုင်လီမိတက်က ထိမ်းထားသည့်သဘောဆောင်သည်။ တနည်းဆိုရသော် မြန်မာ့စီပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်သည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ထင်သလို ငွေကိုသုံးနိုင်ရန် စာရင်းစစ်၍မရသော အဖွဲ့စည်းတခုဖြစ်နေပြီး စစ်တပ်ကို ကျော ထောက်နောက်ခံပြုထားသော စီးပွားရေးလက်ကိုင်ဒုတ် တခုလည်း ဖြစ်သည်။
၁၅။ နိုင်ငံတော်အာဏာကို စစ်တပ်ဖြင့် သိမ်းယူထားချိန်တွင်စစ်ဗျူရိုကရက်များ၏ စီးပွားရေးအတွက် အစစအရာရာ အာမခံချက်ရှိနေသည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပ ကြိုက်သလို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသည်။ ကြိုက်ရာနိုင်ငံနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ဖုံးချင်သလောက်ဖုံး၊ ထုတ်ပြောချင်သလောက် ထုတ်ပြောနိုင်သည်။ စေတလုံးပိုင်နေကြသည်။ ထို့ပြင် နိုင်ငံရေး ပင်စင် ဥပဒေဆိုသည်မျိုး အပါအ၀င် ၎င်းတို့ထင်သလို ဥပဒေများထုတ်ပြန်ပြီး ကြိုက်သလိုခံစားနိုင်ကြသေးသည်။
၁၆။ သို့သော် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကာလပြီးပါက အရပ်သားတချို့ပါဝင်သော အစိုးရသစ်လက်သို့ အာဏာကို လွှဲရမည်လိုလို ဖြစ်လာသောအခါတွင်မူ ယခင်အခွင့်အရေးမျိုးများအတွက် အာမခံချက်များနည်းလာနိုင်သည်။ ထို့ ကြောင့် စစ်တပ်အ၀န်းအ၀ိုင်းတခုလုံးအတွက် (အထူးသဖြင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ မိသားစုအတွက်သာ) စီးပွားရေးအရ လဒ တသောင်းနားနိုင်သော သစ်ပင်ကြီးတပင် ရှိဖို့လိုလာသည်။ အနည်းဆုံး ခြေမမြဲတောင် လက်တော့ မြဲစေရမည်။ ဤသို့သော ဟာကွက်ကို ဖြည့်ဆည်းရန်မှာ ကိုယ့်လက်ထဲအာဏာရှိတုန်း စီစဉ်ဖန်တီးရလျှင် အလွယ်ဆုံးအကောင်းဆုံး ပင် မဟုတ်ပါလော။
၁၇။ ထို့ပြင် ဤဦးပိုင်လီမိတက်ကို လက်ညှိုးထိုးပြီး စစ်ဗိုလ်ချုပ်များအနေဖြင့် ၎င်းတို့နည်းမျိုးစုံဖြင့်ရရှိထားသော ငွေမည်း များကို တရားဝင်အောင် ပွဲထုတ်နိုင်ပေတော့မည်။ ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်စသည့် နိုင်ငံများမှ စစ်အုပ်စုများ လုပ်လေ့ရှိသလို အောက်ခြေကို စားကြွင်းစားကျန်လေးများနှင့် ချွေးသိပ်ရန်စီစဉ်ခြင်းပင်။
၁၈။ နောက်ပြီး မူလက ကြေးစားဆန်ဆန် လစာဆိုသည့်အနှောင်အတဲ တခုထဲနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် စစ်တပ်အား စည်း လုံးစေရန် နောက်ထပ်သံယောဇဉ်အနှောင်အတဲတခု ထပ်ဖြည့်လိုက်ခြင်းဟုလည်း ဆိုနိုင်သည်။ တပါတည်းတွင် တပ်ထဲ မှာပဲ ဆက်ရှိရှိ၊ တပ်အပြင်မှာပဲရှိရှိ အားလုံးတလှေထဲစီး၊ တခရီးထဲသွားချည်းပဲ၊ ထို့ကြောင့် စစ်အုပ်စုထိပ်သီး ပိုင်း၏ တ သွေး၊ တသံ၊ တမိန့်ကို နာခံရန် အမြဲအသင့်ရှိရေးဆိုသော စိတ်ဓါတ်ကို ခံစားခွင့်ပြပြီး ရိုက်သွင်းပေးနေခြင်းလည်း ဖြစ် သည်။ အရေးကြီးသည့် နောက်အကြောင်းတကြောင်းမှာ နောင်မှာပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့် အရပ်သားအစိုး ရအပေါ်တွင် စစ်အုပ်စုနှင့်စစ်တပ်က ဘက်စုံ၌ မားမားကြီးမိုးနေနိုင်အောင် ပြင်ဆင်နေသည့် အစီအစဉ်များထဲမှ တခုဖြစ်သည် ဆို သည့်အချက်ဖြစ်သည်။ နောင် မည်သည့်အစိုးရတက်လာလာ စစ်အုပ်စုနှင့် စစ်ဗျူရိုကရေစီယန္တယားမှာ စစ်ရေးအရ (ထို့ကြောင့် နိုင်ငံရေးအရပါ) မလွှဲမရှောင်သာ အသိအမှတ်ပြုရသော အင်အားတရပ်သာမကတော့ဘဲ စီးပွားရေးအရပါ အသိအမှတ်ပြု နေရာပေးရသည့်အဖြစ်မျိုး ဆိုက်လာပေရော့မည်။
၁၉။ ဤစစ်တပ်ဦးပိုင်လီမိတက်သည် လက်တွေ့တွင် နဂိုကမှ အဆင့်အတန်း အင်မတန်ကွာခြားနေသော စစ်တပ် ထိပ် ပိုင်းနှင့် အောက်ခြေတို့အား ပိုမိုကွာခြားစေမည်သာဖြစ်ရာ ရေရှည်တွင် အောက်ခြေက ထိပ်ပိုင်းကို မကျေနပ်မှုများ ပေါ် ပေါက်စရာ အကြောင်းတကြောင်းလည်း ဖြစ်လာမည်မှာ သေချာသည်။ အချို့တပ်ရင်း/တပ်ဖွဲ့မှူးများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ ရှယ်ယာထည့်ဝင်ရေးရည်မှန်းချက် ကျပ်သိန်း (၅၀၀) သိန်း (၃၀၀) စသည်များပြည့်မီရေးအတွက် အောက်ခြေ စစ်သည် များ၏ စားဝတ်နေရေး၊ သက်သာချောင်ချိရေးတို့အား ဖြေရှင်းမှုမပြုနိုင်တော့ဘဲ (၁၂) ရာခိုင်နှုန်းရရှိသည့် ဦးပိုင်အမြတ် ငွေများဖြင့် အစုရှယ်ယာများ ထပ်မံဝယ်ယူပေးခဲ့ရပါသည်။ တပ်ရင်းမှူးများအနေဖြင့် မိမိ၏ရာထူးတက် လမ်းအတွက် အစုရှယ်ယာသတ်မှတ်ချက်များပြည့်မှီရေး အသဲအသန်ရှာဖွေခဲ့ရပါသည်။ ဆိုးရွားသည့်အကျိုးရလဒ်မှာ တပ်မ ၁၁ ရှိ ခမရ (၂၁၄/၂၁၅) တပ်ရင်းမှူးတချို့က စစ်သည်များ၏ ဘဏ်စုဆောင်းငွေများကို ကာယကံရှင်များ မသိလိုက်ရဘဲ ဦး ပိုင် ရှယ်ယာများဝယ်ယူရေးအတွက် တပ်ရေးဗိုလ်ကြီးများကို လျှို့ဝှက်ထုတ်ယူစီစဉ်ခိုင်းလိုက်သဖြင့် ပေါက်ကြားသွားပြီး ပြဿနာများ ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
မြန်မာစီးပွားရေးဦးပိုင်လိမိတက်အောက်ရှိ စက်ရုံများတွင်လည်း ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးများ၊ ဗိုလ်မှူးကြီးများ စက်ရုံမှူး အ ဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာတွင် အကျိုးအမြတ်ရရှိသောစက်ရုံများ ရှိသကဲ့သို့ နှစ်စဉ်အမြဲတမ်း အရှုံးပြနေ သော စက်ရုံများ၊ လုပ်ငန်းများလည်း များစွာရှိသည်။ အရှုံးပြရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းများမှာ စက်ရုံလုပ်ငန်း များအတွက် နိုင်ငံခြားမှတင်သွင်းလာသော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများမှာ အရည်အသွေးမီသော်လည်း ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းသို့ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ ရောက်ရှိလာပြီဆိုသည်နှင့် နိုင်ငံခြားမှတင်သွင်းလာသည့် တာဝန်ရှိသူများနှင့် စက်ရုံမှူးများ လက် ၀ါးချင်းရိုက်ကာ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်းသို့ ပို့လိုက်ကြပါသည်။ အရည်အသွေးပြည့်မီသော ကုန်ကြမ်းများအား အရည်အ သွေးညံ့သည့် ကုန်ကြမ်းများနှင့် အစားထိုးလိုက်ပါတော့သည်။ ပလပ်စတစ်ရက်ထည်အိတ်စက်ရုံနှင့် ပလပ်စတစ် လူသုံး ကုန်စက်ရုံများဆိုလျှင် နိုင်ငံခြားမှ အရည်အသွေးမီကော်စေ့များအား ရောင်းစားပြီး လမ်းဘေးတွင် စွန့်ပစ်ထားသော ပလပ်စတစ်အဟောင်းများ ၀ယ်ယူ၍ ပြန်လည်အသုံးပြုသည်ပင် ရှိပါသည်။ စက်ရုံမှူးများသည် အရည်အသွေးမီ ကုန် ကြမ်းများ ရောင်းစားရသည်ကိုပင် အားမရသေးဘဲ စက်ရုံမှထွက်ရှိသည့် ကုန်ချောပစ္စည်းများကိုပင် အောက်ခြေ၀န်ထမ်း များနှင့်ပူးပေါင်းကာ ခိုင်းရောင်းလိုက်သေးသည်။ အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေး (QC) အဖွဲ့အား စက်ရုံမှူးများမှ ညှိထားပြီး ဖြစ်သည်။
၂၀။ မူလက တပ်မတော်နှင့်တပ်မတော်သားများအကျိုးအတွက်ဟုပြောဆိုကာ ဖွဲ့စည်းခဲ့သော်လည်း လက်တွေ့တွင်မူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့် ၎င်းတို့မိသားစု ဆွေမျိုးသားချင်းတစုသာ ကုဋေကြွယ်သူဌေးကြီးများ၊ ဇောတိကများ ဖြစ်သွားစေခဲ့ ပြီး အောက်ခြေရဲဘော်အများစုမှာ အများပြည်သူနည်းတူ ဆင်းရဲမွေတေမှုများနှင့်သာ နပန်းလုံးနေကြရပေသည်။ သာ မန် တပ်မတော်အရာရှိများ၊ စစ်သည်များ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းများနှင့် ပြည်သူလူထုနှင့် ရဟန်းသံဃာတော်များ အမှန် တကယ် ကျောင်းသင်္ကန်းဆောက်ရန်၊ အိမ်များဆောက်လုပ်ရန်၊ နေအိမ်ဆောက်လုပ်ခွင့်များ ပါမစ်များ ဖြင့်ဘိလပ်မြေ လျှောက်ထားသော်လည်း အလွယ်တကူရရှိခြင်းမရှိ။ ဆင်မင်းဘိလပ်မြေစက်ရုံ၏ သွင်းဈေးမှာ (၃၀၀၀) ကျပ်သာ ဖြစ် သော်လည်း ပြင်ပဈေးနှုန်းမှာ (၄၀၀၀) မှ (၄၅၀၀) ကျပ်အထိ ရှိသည်။ ၎င်းဈေးနှုန်းများမှာ ဘိလပ်မြေပွဲစားများမှ စက်ရုံ တွင်ဝယ်ယူသော ဈေးနှုန်းဖြစ်ပြီး ပွဲရုံသို့ရောက်ရှိပါက ကျပ် (၅၀၀၀) မှ (၅၅၀၀) ကျပ် အထိ ရှိသည်။ အခွင့်ထူးခံ တပ်မ တော်အရာရှိကြီးများနှင့် မိသားစုဝင်များ လျှောက်ထားပါက အနည်းဆုံး အိတ် (၃၀၀၀) မှ အိတ် (၅၀၀၀၀) ထိ ရရှိကြ သည်။ ထိုမျှမကသေး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေးတို့၏ တပည့်များဖြစ်သော အိမ်တော် ပါ သက်တော်စောင့်အရာရှိများနှင့် စစ်သည်များအား လစဉ် တဦးလျှင် အိတ်(၁၀၀၀) နှုန်း ထုတ်ယူခွင့်ပြုထားပါသည်။
၂၁။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲမှ တက်လာမည့် ဘောင်းဘီချွတ် အရပ်ဝတ် ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများသာ ကြီးစိုးသည့် အစိုးရသစ်အနေဖြင့်လည်း ရာသက်ပန်တပ်မတော်ထိပ်သီးကြီးနေရာမှာ စိုးမိုးနေရာယူထားသည့် တပ်ချုပ် ကြီး သန်းရွှေနှင့် ဒုတပ်ချုပ်ကြီး မောင်အေးတို့၏ အာဏာစက်အား မလွန်ဆန်နိုင်သဖြင့် ၎င်းတို့၏အကျိုးစီးပွားများနှင့် တသားတည်းဖြစ်နေသည့် ဤ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီကြီးကို အသက်နှင့်ရင်းကာ ကာကွယ်ကြပေဦးမည်မှာ မြေကြီးလက်ခတ်မ လွဲ ဖြစ်ချေသည်။ သို့သော် လွှတ်တော် (၃) ရပ်တွင် တက်ရောက်လာမည့် အရပ်သားလွှတ်တော်အမတ်များအနေဖြင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးအပေါ် ဦးပိုင်နှင့် စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းတို့၏ စီးပွားရေးချယ်လှယ်လွှမ်းမိုးမှုအား မေးခွန်းများထုတ်မှာ ကို မလွဲဧကန်ကြုံတွေ့ ရင်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ မေးခွန်းများကို မဖြေနိုင်ပါက စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များနှင့် ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် ဦးပိုင်အတွင်း ငွေကြေးရှုပ်ထွေးမှု ပြဿနာဂယက်ကြီးမားလာပါက တပ်မတော်အတွင်း ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
၂၂။ တပ်မတော်တွင်းက အောက်ခြေရဲဘော်များနှင့် ပြည်သူလူထုအဖို့မူ ပြည်သူတို့သွေးချွေးများဖြင့် ပေကျံနေသော ဤစစ်တပ် ဦးပိုင်လီမိတက်ကြီးကို မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်းရပေဦးတော့မည်။
Photo source: http://www.hbo.com/documentaries/burma-soldier/slideshow.html
The burmese people should be aware of every step of Thein Sein’s government movement .
Thein Sein’s government is justapuppet government and democracy in Burma is just dream.
အဲဒါကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဦးပိုင်ဆိုတာ ဘာကြီးလဲဆိုတာ မမေးပဲနဲ့သိတယ်...တစ်တိုင်းပြည်လုံး ဖွတ်တွင်းထဲ ကန်ချခဲ့တဲ့ ငတေ ငရွှေအပေါင်းအပါတွေပဲ စုဖွဲ့ထားတာ..ဘယ်နည်းနဲ့မှ မျှမျှတတ ဖြစ်လာဖို့မရှိဘူး..
I am wondering how could the writer know so much details of classified information? Are you ex-MI agent?
If so up yours...